Umthakathi Game 🥇 Faka futhi Jabulela kusuka Emulator.Online
Umthakathi Game. Kuyinto umdlalo omnandi kakhulu, ithuthukisa umqondo kanye nenkumbulo namakhono wendawo. Yazi umlando wayo, okuhlukile nokuthi ungadlala kanjani.
Umthakathi Game: kanjani ukudlala igxathu negxathu? 🙂
Ukudlala i-Sorcerer Game online mahhala, kalula landela le miyalo yesinyathelo ngesinyathelo :
Isinyathelo 1 . Vula isiphequluli sakho osithandayo bese uya kuwebhusayithi yegeyimu Emulator.ku-inthanethi.
Isinyathelo 2 . Ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi, umdlalo uzovele uboniswe esikrinini. Kumele uchofoze nje Play futhi ungaqala ukukhetha ukucushwa okuthanda kakhulu. 🙂
Isinyathelo 4. Ukunqoba lo mdlalo kufanele udle wonke ama-apula ngaphandle kokushaya izindonga noma wena . Noma ngubani othola amaphuzu amaningi ekupheleni komdlalo uzowina.
Uyini umthakathi umdlalo? 🔴
Umthakathi ngumdlalo olula futhi omnandi ongangena ku-inthanethi ngaleli khasi.
Snake-imidlalo yohlobo olufunwa kakhulu ngenxa yobulula bayo, ukudlala kwayo nokuba mnandi ngokwedlulele, futhi uMthakathi ungomunye wemidlalo ehlangabezana nazo zonke lezi zici.
Umthakathi uphonsa amabhola anemibala ngenduku yakhe eketangeni, elenziwa yilezi zingqukuva ezifanayo. Inhloso yomthakathi ukwenza wonke amabhola anyamalale ngaphambi kokuba bafinyelele emgodini wokugcina. Ukuze wenze lokhu, kufanele ujoyine amabhola amathathu noma ngaphezulu ombala ofanayo ukuze aqhume futhi anyamalale eketangeni futhi afinyelele umgomo wakho.
Indaba Yomthakathi ⚫
Imidlalo efana noMthakathi, ehlose ukuqeda uchungechunge lwamabhola ngokujikijela amabhamuza anemibala endaweni ethile, yadalwa ngo-1995.
Izithameli obekuhloswe ngazo bekuyizingane. Kwakungu- umdlalo wezingane , ngoba indlela yayo yayilula futhi amabhola anemibala athandwa yizo zonke izingane. Kodwa esikhathini esifushane, kwavela ukuthi hhayi izingane kuphela ezazifuna ukudlala, nabantu abadala nabo bawuthandile lo mdlalo . Lokhu kumangaze kamnandi abadali bayo nezinguqulo eziningi zakhiwe ngalesi sihloko esifanayo.
Ukuthandwa kwayo okukhulu kwakubangelwa ukuthi kungenzeka idlalwe ngekhompyutha ngemuva kokuthenga igobolondo, yingakho ibithathwa njengomdlalo we-pc. Kulezi zinsuku, akudingekile ukuthenga ngokomzimba umdlalo okuyi-advance enkulu.
Its design elula kusho ukuthi ingadlalwa kunoma iyiphi idivaysi, kungaba ngamakhonsoli, amaselula, amaphilisi ngisho mahhala ngamakhasi aku-inthanethi.
Njengoba kungekho zingeniso ezinkulu, azikho izidingo zehluzo ezinkulu noma eziyinkimbinkimbi, lo ngumdlalo olula, onselele futhi ojabulisayo.
Izinhlobo zemidlalo yoMthakathi 🔵
Umthakathi umdlalo uhlobo yemidlalo yebhola enemibala . Ungayazi futhi njengemidlalo ye-Bubble noma bubble Bhalobhasha futhi inhloso iyafana, bhubhisa uchungechunge noma ukulandelana kwamabhola anemibala ngokuphonsa amabhamuza. Uma uhlanganisa ezintathu noma ngaphezulu zombala ofanayo, ziyasuswa.
Sizobiza imidlalo emele kakhulu yale fomethi.
Ingenye ye amabhamuza adume kakhulu . Kulokhu akulona uchungechunge lwamabhola, kepha amabhola anqwabelana ophahleni lwesikrini futhi kufanele uwaqede ngaphambi kokuba ehlele phansi.
Enye imidlalo yama-bubble yevidiyo yakudala, nge uhlelo olulula kodwa olusheshayo lokho kukuphoqa ukuthi ucabange ngokushesha uma ungafuni umshini ukukushaya.
Amagwebu azungeza ukuvunguza lokho kusondele ngokuyingozi esikhungweni. Ukuvimbela lokhu ukuthi kungenzeki, kufanele udubule amagwebu ukuze uwangenise ochungechungeni, wenze amaqembu angama-3 noma ngaphezulu ukuze abe mafushane. Uma uqeda ngolunye lwamaketanga uzoya ezingeni elilandelayo, ngokushesha nangaphezulu. Ngabe uzogcina unqobile inyoka emibalabala?
Kulokhu, kukhona ukuguqulwa futhi iqiniso ukuthi amagwebu abunjwe ezahlukene izithelo , okuzofanele ujoyine ngamaqembu wabathathu noma ngaphezulu ukuze uziqede futhi usule isikrini.
Kodwa-ke, lo mdlalo unezici ezimbalwa ezenza ugqame. Ngokwesibonelo, njengoba isikhathi sihamba amagwebu aya phansi , ngakho-ke uma ungasabeli ngokushesha, ungazithola usuphela umdlalo kusenesikhathi kakhulu kunalokho okulindele.
Futhi uma usafuna ukukwenza kujabulise ngokwengeziwe, zama imodi ye-colorblind, lapho imibala iguqulwa khona futhi ungaba lula, noma cha.
Imithetho yomdlalo Umthakathi 📏
Ukudlala Umthakathi kulula kakhulu futhi kumnandi , yingakho kungumdlalo ofanele wezingane nabadala.
Ukuphela kokufanele sikwenze sebenzisa induku yabenzi bemilingo ukuthumela amabhola endaweni efanele eketangeni. Umgomo wethu ukwakha iqembu okungenani lamabhola afanayo ama-3 ukuze lawa mabhola anyamalale kuketanga futhi ngaleyo ndlela akuvimbele ukuthi likhule.
Kumele susa wonke amabhola ngaphambi kokuba afike ekugcineni lendlela bese ushibilika ngembobo.
Shesha ngoba ihamba ngokushesha okukhulu! Kunamazinga amathathu ahlukene wokuqedela umdlalo.
Amathiphu mayelana nomthakathi womdlalo 🙂
Umthakathi akanayo imithetho eyinkimbinkimbi kakhulu, kepha lokho akusho ukuthi ngumdlalo oyisicefe. Eqinisweni, uma ungakwenzi cabanga ngalezi zeluleko, wena kungenzeka zibhajwe emazingeni futhi zingakwazi ukuzidlulisa.
Lesi yiseluleko sokuqala esikunikeza sona. Ekuqaleni kubonakala sengathi akunazinkinga nokuthi uzoliphasa lelo zinga ngokushesha. Kodwa cha! Lapho ufuna ukuyibona, uchungechunge lwamabhola lukhulu kakhulu futhi luhamba ngokushesha okukhulu kangangokuba awunaso isikhathi sokulususa futhi uthola konke ukubeka amabhola anemibala ezindaweni ezingafanele.
Yebo, sesivele sazi ukuthi leyo yinhloso. Kepha yimaphi amabhola ozowasusa kuqala?
Noma nini lapho ungakwazi khipha amabhola ekhanda leketanga. Khumbula ukuthi laba bazoba ngabokuqala ukufinyelela emgodini oholela ekuvinjelweni kwethu, futhi yilokhu esifuna ukukugwema.
Khohlwa okwakamuva, okungenani inqobo nje uma iketanga likhulu.
Kuyini lokhu kususwa okuzenzakalelayo? Uhlobo oluthile lwesiphonso esivela kumlingo? Hhayi, cha. Lokhu kuzofana nokuba ne- Isu. Kumele sikuqinisekise lokho lapho ususa umbala ochungechungeni, umbala ofanayo ufana emaphethelweni awo ukuze aqedwe ngokwawo lapho owokuqala unyamalala.
Kubheda kakhulu? Ngikunika i- isibonelo.
Kumaketanga ethu sinokulandelana okulandelayo: Okuphuzi, i-lilac, i-lilac, okuphuzi, okuphuzi, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuluhlaza okotshani, okuphuzi ...
Indawo ekahle yokwethula ibhola le-lilac kuzoba phakathi kwama-lilac amabili ndawonye. Ngakho-ke, sisusa umbala we-lilac emgqeni, akunjalo? Okulandelayo okuzokwenzeka ukuthi lapho umbala ophuzi uhlangana, amabhola amathathu aphuzi aqondana nalawo ngokwawo ayanyamalala.
Ingabe uzithandile izinhlobo zalo mdlalo? Ingabe la maqhinga akusiza ? Njengoba ukwazi ukubona, kukhona amathani emidlalo nezindlela zokujabulela i- Umthakathi umdlalo.
Yini oyilindele ukuqala ukujabulela!